Ny Fikambanan’ny Tily sy Mpanazava Tranainy ary ireo Sakaiza eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo – FJKM Ambavahadimitafo Ny Fikambanan’ny Tily sy Mpanazava Tranainy ary ireo Sakaiza eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo |
Ny Fikambanan’ny Tily sy Mpanazava Tranainy ary ireo Sakaiza eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo
Publié le 06 juillet 2014 à 10:07
Ny Fikambanan’ny Tily sy Mpanazava Tranainy ary ireo Sakaiza eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo dia efa ela no nisiany ary niarahany niasa tamin’ny SAMPATI faha-XIII fa vao herintaona kosa izay no nanorenana azy ho ara-dalana teo anivon’ny Fiangonana ka niantsoana azy hoe TMT (Tranainy Mitambatry la Treize) ary anisan’ny asa efa vitan’izy ireo ny fanampiana ireo Tily sy Mpanazava amperinasa amin’ny lafiny maro sy ny fikojakojana ny local scout ary ny fananganana tsangambato amin’ny fotoan-jobily toy ny seza vato eo an-tokontanim-piangonana tamin’ny Jobily faha-60 taonan’ny Fivondronan’ny Tily sy Mpanazava faha-XIII ny taona 2009.
Ny TMT dia natsangana mba:
Hanamafy orina ny firaisankinan’ireo Tily sy Mpanazava Tranainy ary ireo Sakaiza rehetra.
Hanampy ny Komitim-Pivondronana KP amin’ny fampandrosoana ny fitaizana skotisma atao eo anivon’ireo mbola eo am-perinasa.
Hampanjaka ny firahalahiana sy fifankatiavana.
Hanompo an’Andriamanitra ary hiasa ho an’ny Tanindrazana.
Nisy ny soritrasa maro efa vita (jereo ny sary niarahana) ary feno herintaona amin’ny Alahady 20 Jolay 2014 izao ny TMT. Ho marihina amin’ny fotoam-pivavahana iraisana izany ny marainan’io andro io manomboka amin’ny 9 ora ao amin’ny FJKM Ambavahadimitafo. Hanao fanamiana mitovy daholo isika tranainy izay nandalo tao anatin’izany fitaizana skoto izany ary hotronon’ireo ankizy amperinasa ankehitriny ka hiara-hiredona hira iray izay nandraisantsika ny antson’ny Tompo.
Koa manentana antsika rehetra hiara-hanafana ny fihaonana sy ny fiarahana ary ny famerenan-kira ny Sabotsy 12 sy 19 Jolay 2014 izao manomboka amin’ny 3 ora ao amin’ny Local Scout Ambavahadimitafo”.
Chef NDREMA (Serasera TMT)
09/01/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . MIASAFIA
Toriteny an-kira Miasafia – Alahady 09 Janoary 2022
Alahady 09 Janoary, famaranana ny fankalazana ny faha-5 taona ny antoko mpihira MIASAFIA, nanatanterahan’izy ireo toriteny an-kira. Andeha hiombona amin’izany fotoam-pivavahana izany :
02/01/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana
Alahady 02 Janoary 2022, alahadin’ny taom-baovao. Mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao; Zanahary no mitaiza ka hisaory sy hajao. Manasa anao hanaraka ny fanompoam-pivavahana :
31/12/2021 A la une . Antso sy filazana
Fandaharana Alahady 02 Janoary 2022
Manasa antsika sahady hiomana ho amin’ny fanompoam-pivavahana alahady voalohany amin’ny taona 2022. Toy izao ny fandaharana hiombonantsika amin’izany :
25/12/2021 A la une . Fanompoam-pivavahana
Krismasy fifaliana 2021 : Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio
« Ary hoy ny anjely taminy : Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho an’ny olona rehetra, fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia Kristy Tompo », Lioka 2 : 10-11 Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra amin’ity krismasy 2021 ity. Andeha hiombona amin’izany
23/12/2021 Antso sy filazana
Fandaharana Krismasy 2021
« Ary hoy ny anjely taminy : Aza matahotra ; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra ; fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia Kristy Tompo.» Lioka 2 : 10 – 11 Indro ny fandaharana ny Sabotsy 25 Desambra 2021 amin’ny
19/12/2021 A la une . Fanompoam-pivavahana
Mifalia amin’ny fanantenana
Alahady 19 desambra 2021, fanompoam-pivavahana teto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo nanokanana ireo katekomena andriany « Fanantenana ». Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Romana 12;12a : « Mifalia amin’ny fanantenana »
14/12/2021 Antso sy filazana
Fandaharana Alahady 19 desambra 2021
Toy izao no fandaharana ho amin’ny fandraisana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo andiany « Fanantenana » ny alahady 19 desambra 2021 manomboka amin’ny 9 ora maraina :
12/12/2021 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Ny fiainam-pianakaviana mahafaly an’Andriamanitra
Alahady 12 desambra 2021, natokana ho an’ny Sekoly Alahady mbola andinihina ny lohahevitra hoe « Minoa ny fifaliana ao amin’ny Tompo« . Ny hafatra avy ao amin’ny Ohabolana 23 : 12-18 no notoriana « 12Ampiekeo famaizana ny fonao, Sy tenim-pahalalana ny sofinao.13Aza tsy manafay zanaka, Fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny hazo
06/12/2021 A la une . Antso sy filazana
Daty tsara ho fantatra : Desambra 2021
Toy izao ny tetiandro eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo ho amin’ity volana desambra 2021 ity : « Miorena tsara aza miova » 18 desambra 2021 : Fanadiovana Faobe : SOKAJY MINO – STA – SAMPATI – TMT – DORKASY 12 desambra 2021 : fizaran-doka Sekoly Alahady 19 desambra 2021 : fandraisana Katekomena « Fanantenana » 20 hatramin’ny 24 desambra 2021
05/12/2021 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Minoa ny fifaliana ao amin’ny Tompo
« Minoa ny fifaliana ao amin’ny Tompo », izany indray no lohahevitra vaovao banjinina eto amin’ny sahan’ny FJKm ho an’ny volana Desambra. Alahady 05 desambra 2021, nitondran’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain ny hafatr »Andriamanitra avy ao amin’ny Filipiana 4 : 4a – 5b : « Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo … efa mby akaiky ny Tompo »